Soomaali la dilay ka dibna lagu gubay dalka Kenya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Soomaali la dilay ka dibna lagu gubay dalka Kenya
Afar qof oo Soomaali ah oo laba ka mid ah la sheegay inay walaalo ahaayeen ayaa lagu dilay Gobolka Tanariva ee dalka Kenya,kuwaas oo sidoo kale la sheegay in meydooda la gubay.
Dhacdadaas oo aad looga naxay ayaa waxaa la sheegay inay ka dambeeyeen rag hubeysan ilaa iyo hadda aan la garan kuwaas oo dilka kadib goobta ka baxsaday.
Labada qof ee walaalaha ah ee ka mid ah Afarta qof ee la dilay ayaa waxaa Magacyadooda lagu kala sheegay Xuseen Cali iyo Mustaf Cali,waxaana dad ku sugan Ismaamulka Tanariva ay sheegeen in meydkooda la gubay si aan loo aqoonsan.
Labada kale ee la dilay ayaa iyana la sheegay inay ahaayeen Darawaliin ka Shaqeeya inta u dhaxeysa Magaalooyinka garsii iyo Gaarisa,isla markaana la arkay meydkooda oo lagu riday Saqaf,kadibna la gubay.
Ehelada Marxuumiinta la dilay ayaa waxaa ay sheegeen inay aad uga argagaxeen dilka loo geystay Wiilashooda,isla markaana ay cadaalad dalbanayaan.
Wararka qaar la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in ragga hubeysan ee falkaan geystay ay markii hore iska dhigayeen askar,hayeeshee si bareer ah ay Afarta qof ee Soomaalida ah ay dileen,kadibna ay gubeen meydkooda.
Taliyaha Booliska Ismaaulka Tanariva ayaa balan qaaday inay baarayaan dhacdadaadi xun,isla markaana ay cadaaladda horkeeni doonaan dadkii ka dambeeyay dilkaas oo markii hore iska dhigayay inay ka tirsan yihiin Ciidamada Booliska dalka Kenya.
Previous articleBangiga Adduunka oo ku baaqay in lacag loogu deeqo Xaaladda Bani’aadanimo ee Soomaaliya
Next articleBurundi oo sheegtay in 12 ciidankeeda ka tirsan lagu dilay Soomaaliya